खुल्लामन्च: May 2009
सधैं आमा मेलामा जानुहुन्थ्यो । बुवा परदेशमा भारी बोक्न । पत्याउनुहुन्छ भने मैले आफु नौ बर्षको हुँदादेखी खेतबारी जोत्न थालेको । त्यसैले त मान्छे पनि हलोको अनोक भन्दा अल्को [अग्लो] नभा'को, हा हा !!! त्यही त गाउले जिन्दगी । घरबाट धेरै तल सिर्दी खोलामा बुवाले केही सुर्को खेत जोड्नुभएको थियो । आफुभन्दा लामो हलो, घरमा भएको लाले गोरु अनी ठुलो बुवाको घरमा भएको चम्रे गोरु लिएर एक बिहानै म खोलाको खेतमा गोरु नार्न पुग्थे । सानो मान्छे, टाढाको खेत र अफ्ट्यारो बाटो । जाबो दुई घण्टामा कति नै जोत्न सकिन्छ र ? आफु फेरी पाठशाला पुग्नु छ । बन पार गर्दै उकालीदा बाटामा पर्ने १३ किलो बजारबाट आफ्नै स्कुल पढ्ने साथीहरु आठै बजे बसमा चढेर स्कुल लाग्थे । कोही छतमा बसेर फ्रूटी चुस्दै त कोही बसको ढोकामा झुन्डेर वाइ-वाइ चपाउदै । तर प्राय म हलो खेतमा गाडेर जुवा चाँही अरुले चोर्लान भनेर आफ्नै काधमा लट्ठिले अड्याउदै उकालीन्थे ।
यसरी नै चले आफुले जाने देखिको बालकाल र स्कुले जिबन । एक दिन परिवार सँग टन्टलापुर घाममा घैया गोड्दै गर्दा दिउसै कता कता एकदम डर लागेर आयो । किनकी एस एल सिको नतिजा आउने बेला भइसकेको थियो । आफु हिसाब भने पछी कुनी के हो आउने । अगाडि परेकी साथीको [जो कक्षामा दोस्रा थीइन] को चोरेर पास हुने आस । रामाराम, त्यो एस एल सि फेल भएको भए म आजसम्म हिसाबकै परिक्षा दिइरहेको हुन्थे । त्यसै डरको बिचमा आफुमा पनि सपनाको नगरि "नेपाल शहर" जाने रहर जागेर आयो । १५ बर्षको उमेरमा बुवा सँग ५०० रुपैया लिएर काठमाडौं आएपछी हामीहरुले गाउबाट आएपछी गरिने दु:ख त पहिले नै लेखिराखेको हुन्छ नै । छैटौ दिनमा पुर्पुरोमा जस्तो लेखिएको थियो, त्यस्तै दु:ख गरियो, बसियो, चलियो अनी चलाइयो । खैर प्रसँग अर्कै तिर गयो जस्तो छ ।
जसरी शहरी दिनचैर्या गाउले तरिकाले चलेको थियो । प्रेम भन्ने नौलोचैर्या त्यतिखेर मेरो जिन्दगीमा शायद शहरी तवरले चल्यो झै लाग्यो । दिनभरी ठमेलमा अरुकोमा काम गरिन्थ्यो । साझ लेखनाथ मार्गको म:म: खाएर क्याम्पस पढिन्थ्यो । राती पढेपनी किन किन दिउसो पढ्न मन लागेर आयो । अलिअली राजनीति गर्ने बानी त्यतिबेला । बढी नै बोल्न पर्ने । साथीहरु अनेक तरहका हुन्थे । काम र अली अली आम्दानी अनी नचढिएको नौलो मायाको ताम्दानिले कता कता काउकुती लागे झै हुन थाल्यो ।
दसैंमा घर गएर फर्के पछी सँगै बस्ने मेरो साथी केही महिना नफर्कने कारणले म कोठा सर्ने निधोमा पुगे । कती हुन्थ्यो र सामान ? एउटा कम्बल, फमको ओछ्यान, कुकर र दुई चार वटा किताब अनी एउटा रातो प्लास्टिकको बाल्टी । आधा घण्टामा सरियो बास । सरेको ठाउमा सामान सार्दै गर्दा मुल ढोका खुलै थियो । भोक लागेकोले कालो चिया र एक पाउन्ड पाउरोटी भकुर्ने जोहोमा पसलबाट फर्केको त ढोका बन्द। अब परेन फसाद !!! कसलाई बोलाउने ? को को बस्छन त्यहा, आफुलाई थाहा छैन । त्यती बेला कसैको मोबाईल थिएन । के गर्ने ? यसो हेरेको घन्टी बजाउने ठाम र'छ । बजाउनै पर्‍यो । टिङ्डिङ पारेको त, दुई सेकेन्डमा एउटी पार्वतीको उपस्थित भयो त्यहा । जालन्धरले पार्वती देख्दा मुर्छा परे सरि भए म त्यस बखत ।
अब ठमेलको म:म: होइन, कोठामा भात पकाएर खाने बहानारुपी जागर जागेर आयो । त्यतिबेला हिट्स एफ एम को "मेरो कथा - मेरो गीत" खुबै प्रख्यात थियो । सन्योग, मेरो खाने छुट्टी पनि त्यती नै बेला हुने । मेरो कथा नआउने दिनमा माया र पिरतिका गीत बजाउन थाल्ने भएछु । बजाए पनि । कोठाको कुनापट्टी त्यो फ्ल्याटमा बस्नेहरुले प्रयोग गर्ने पाइखाना रहेछ । जब मैले बजाएका गीत अनी अरुले एफ एम मा भनेका गीत बज्दथे, त्यो पाइखाना र मेरो कोठाको जोडीएको झ्यालमा ति "पार्वती"को आवागमन हुन थाल्यो । उनी कहिले लुगा धोएकी हुन्थिन त्यता त कहिले बिचरी पाइखाना जादी हुन । म भने मैले बजाएका संगीत सुन्न आएकी मोरी भनेर कुन्ता त फोन्द्रे नाक झन ठुलो बनाउथे अनी बोल्ने बहाना बनाउथे । "कस्तो राम्रो गीत बजाएको दाई ?" कुनै किताब पढिरहेको मेरो दिमाग उनको प्रश्नोत्तरका खातिर आतुर भए । उत्तर कस्तो हुन्थ्यो, त्यो यहाँ किन लेख्नु पर्‍यो र । कुर्कुरे बैशको मायाको उत्तर कसलाई पो थाहा हुँदैन होला र ?
एबम रितले चल्न थाले दिनहरु । उनी पनि म पढ्ने क्याम्पसमा पढ्ने रहिछन । उनको दाजुहरु मेरा सहपाठि-समकक्षी रहेछन । उनकी दिदी मैले काम गरेको ठाउबाटै अफिस जानुहुदो रहेछ । उहालाई म सधैं देख्दथे । विश्वकप फूटबल हेर्न उनको कोठामा जम्मा भएका साथीहरु सबै नजिकका रहेछन । मेरो आँखा उनको सिसाको दराजमा उनको आँखा सँगै त अरुका आँखाहरु टि भि तिर । परिचय, सम्बन्ध र बोलाकिले उनका सबै आफन्तहरु अब मेरा पनि हुन लागे । जिन्दगीमा नयाँ उन्माद र तरङहरुले छाल र तप्काहरु छोडे झै हुन थालयो । निचोड्मा भन्नुपर्दा, अब उनको मेरो बारेमा सबैलाई ज्ञात हुन थाल्यो । अनी सबैले स्विकार्न थाले - हाम्रो आत्मिय मायालाई । क्याम्पसमा हामीले आयोजना गरेका बनभोज र अन्य कृयाकलापमा एउटा पारिवारिक सदस्यले जसरी उनले मलाई सहयोग गर्न थालिन ।
मेरा अती हितैशी मित्र एक दिन मेरो कोठामा आउनु भएको थियो । मेरो निमन्त्रणामा - साग र भात पकाएर सँगै खाने रहरले । त्यस दिन जिन्दगीमा पहिलो चोटि प्याला पियौ हामीले । तर प्रेमको उन्मादमा भने पक्कै थिएन त्यो पिलाई । मलाई सन्चो नभएको जस्तो लागेको थियो । कती बखत के भयो थाहा भएन । अर्धचेत अवस्थामा म त बिर अस्पातलको आकास्मिक कक्ष पो लडिरहेको रहेछु । भोलीपल्ट अली होशमा याद भयो, मैले लगाएको मोजा कसैले खोल्दिदै शरीरलाई आराम महसुश गराउने कोशीश गर्दै थियो । यस भित्र धेरै कथाहरु छन । जुन यहाँ सबै खोलेर अबश्य सम्भब छैन ।
मलाई ब्यथाले छोडेन । परिवारको जेठो सन्तान म । घर अनी आफन्तहरु सबै पिरोलिन थाले । म आफुलाई पनि लाग्यो । अब म कदापी बाच्दिन । बीर अस्पातलको कथित प्रख्यात सर्जन डि बि शाह भनाउदोले मलाई केटी र प्रेमको कारणले चिन्ता जागेर त्यो हालत भएको बताएछ । म त प्राय सधैं बेहोश । कहिले कहिले खुल्थ्यो होश । आफन्त र उनै "पार्बती" को घना उपस्थिती भएको पाउथे - ब्युझदा । उनले पनि सुनिछन, डा. को त्यो भनाइ । यस्ता कुरा होश आउँदा आफुले साथी मार्फत थाहा पाएपछी बेहोश भए पनि म निको भएको बहनाले डिस्-चार्ज हुने निधो गरे । म मेरो करणले कसैले दु:ख नपाउन भन्ने मनसिकताले सार्है ग्रसित भए । मेरा आफन्तहरुले अब उनी र मेरो विवाह गर्ने निर्णय सहित् भोलिपल्ट उनको परिवारलाई भेट्न जाने निधो गरेछन । कोठामा मलाई ल्याको अली अली याद थियो - अस्पातलबाट । तर ब्यथाले मलाई छोडेन । भोलिपल्ट कोही बिहेको कुरा गर्न त कोही डा. उपेन्द्रसँग न्यूरो सम्बन्धी जचाउन लाने कुरो भएछ । म फेरी बेहोश । छट्पटिदै बीर् अस्पातलमा उपेन्द्र देवकोटा कुरेको याद छ । मेरो ब्यथाले अरु बिरामीले मलाई निर्धारित पालो भन्दा अगावै जान अनुमती दिएर ठुलो मानवता देखाएछन । भित्र कोठामा गएपछी उनले भने रे कि चार मिनेट ढिलो भा'को भए, मेरो मृत्‍यु निश्चित । कारण, मलाई म्यानेन्जाइटिस भएको रहेछ । न्यूरो वार्डमा लगेर एक हातको सुइ दिएपछी बल्ल मैले पुनर्जन्म पाएको महसुश हुन थाल्यो ।
अस्पताल बसेको झन्डै एक महिना भैसकेको थियो । बाहिरको संसारमा के भइरहेको थियो, म जानकार कदापी थिइन । हल्ला अनी अनेक हल्ला मात्र । भए नभएका कुरा हरु मात्र । कल्पना अनी ममता मात्र । मलाई पुरै निको भयो । एक हाते सुइ लाएपछी मैले उनलाई केही दिन त देखेको थिए । अस्पातलबाट बाहिरिएपछी मलाई कसैले फोन गरेन । उनिले पनि वास्ता गरिनन । शायद मेरो दोश थियो होला । एउटा बिरामीको, रोगिको अनी बिबशताको दोश । म फेरी कर्मथलो ठमेल फर्कन थाले । मैले गरेका उनका फोनका घन्टिमा बिद्रोहका अरु कसैका तिरस्कारहरु सुनिन थाले । म यूरोप गए । मेरो बिहे भयो । मेरी श्रीमती बिरामी भइन । मेरो छोरो जन्मियो । यती पस्चात मैले उनको बिहेको कुरा सुने । म बस्ने नजिकैको मन्दिरमा उनको धुमधाम बिहेको उन्माद सुनिन्थ्यो । उनी अन्मी रहदा म र मेरी आमा काठमाडौं आउँदै गर्दा मैले आमालाई भने - " आमा त्यो कबिताको बिहेको रमिता हो । " आमा दङ्ग पर्नु भो । म पनि अहिले सम्म दङ्ग छु । सुनेको छु, उनको दुई वटा छोरा जन्मिसकेका छन । म चाहन्थे, 'कम से कम भगवान एउटा छोराको नाम मेरो जस्तो जुराइदेउ ।' तर थाहा छैन के भइरहेको छ उनको दुनियाँ । म त परदेसिएको पनि पाचौ बर्ष पुरा भएछ । तर ममताको साहराले उनिसङै जिउने मेरो मनको रहर शायदै पुरा भयो !!! उनलाई सदा सुख होस् । मंगलमय दिनहरुले सदा सर्बदा प्रगती गराउन । यो भन्दा म के नै तथास्तु पुकार्न सक्छु र ?
निरिह देश, बलबान नेता र मजदुरी आशु :
धेरै मेलम्चिहरु बगे, बगेको बग्यै छन कालिगण्डकी र महाकाली हरु भने तुरुक्क-तुरुक्क रोइरहेको छ हाम्रो बागमती । अन्धकारमा नयाँ नेपालको नक्सा त अब के कोरिएला खै ? मातृभूमीको लाम्टो केही भाग नेता तिर, केही भाग तिनका भाई-संगठन तिर त केही भाग सेना तिर । यिनिहरुले आफुसक्दो लुछिरहेका छन - आमाको लाम्टो । अझै आफन्तहरु लगाएका छन, अरु चुस्न । चुसी चुसी सक्ने भए मुलुक । गोर्खाका कृष्ण प्रशाद भट्टराईले ल्याउने भनेको "सिङापुरे मेलम्ची" गोरखाकै अर्का भट्टराईको बाउको पनि केही लागेन । बरु उनैको श्रीमतिको बल लागेको छ, मन्त्रालयमा सारा आफन्तहरु भर्ती गर्नमा । आफन्तिले मजाले चुस्न पाएपछी जनताको के पीर ? यि नयाँ पुराना भट्टराई अनी यमिहरुलाई ?
धुलिखेलको रिजोर्टमा प्यालाको सुरमा लडेका प्रधानमन्त्री पुत्रको हातमा छ लाख मुल्य पर्ने घडी छ रे । कर अनी अझ कर भन्दा भन्दा थाकेका नयाँ भट्टराईको आँखै अगाडि भन्सार नतिरी ल्याएको तीन लाख पर्ने खाटमा सुत्छन - प्रधानमन्त्री । रोल्पा र गोरखाको कुनाबाट "जनक्रान्ती" गरेकाहरुलाई आराम गर्न "झुले रिजोर्ट" चाहिने भएछ, आज । यि त नयाँ नेपालका नेताहरुका उदाहरण भए । पुरानी भइसकेकी सुजतालाई उप-प्रधानमन्त्री दिन मन्जुर छ रे माओवादी । आफ्नो बाबुप्रती सम्मान नगर्ने र पार्टीको निर्देशन नमान्ने यि राजाकुमारी कोइरालाले के गरी देश चलाऊछु जस्तो सोचेकी होली, सुन्दा पनि हासो उठ्छ । त्यसो त बागमतिको सुगन्ध लिदै मेलम्ची सम्झेर रुने हाम्रो देश कहिले साचो रुपमा हाम्रो देश होला ? कहिले नेपाली जनताले सुखका सास फेर्न पाउने होलान ? हाम्रा बा-आमाका हातमा पनि लाखौं रुपैयाको घडी लगाइदिने दिन कहिले आउला ? साचो रुपमा हामी स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने दिन कहिले आउँला ? यही भजन भन्दा भन्दै बर्शौ बितिसकेछन । हिजो हामीसङै गोल्ढयाक खेली पढ्ने प्रकाश र प्रचन्डहरु कहाँ पुगे, माहिली बहिनीसङै मेलापात नगरे पनी त्यही उमेरकी सुजता देश हाक्ने धमास लागाउछिन, हजुरबुवा सँङै राजनीति गरेका बुढाहरुको अझै प्रधानमन्त्री बन्ने धोको छ । त हामीले के पायौ ? संततिले के पाए ?
भत्किएको मन्दिर बनेन । बिकासका टावरहरु ट्वाल्ल परेर हेरिरहेका छन अनी देश चाँही कृष्णभिर जसरी निरन्तर पहिरेको पहिर्यै । क्रान्तिका नाममा भत्केका पुलहरु त अब कसरी जोडीएलान कुन्नी ! चरित्रवान नेता कोही भएनन । हिजो क्रान्तिका नाममा जलेका आगाका तप्काहरु ननिभ्दै हिमाल, तराइ र पहाडबाट बिभिन्न नामबाट बिद्रोह शुरु भएको छ । अनेक नाममा संगठन र सशस्त्र समुहहरु जन्मेको जन्म्यै, रोकिने कहिले हो ?
जती देश भास्सिएको छ, त्यती नेता बलवान । जती गरीब रोएका छन, त्यती नेता खुशी । जती धाराबाट पानी चुहीदैनन, त्यती नेताहरुका मनमा आनन्द जाग्रित हुन्छन । रोएका छ्न जनता । रोएको छ देश - नेताहरुलाई सधैं दसैं । फाटेको छ मुलुक, चुहिएको छ मुलुक, गन्जागोल भएको छ मुलुक । तर मतलब छैन कसैलाई ।
सत्तामा नेता पुगे पनि नेपाली मजदुर्हरुको हालत आखिर कमाराको भन्दा भिन्न छैन । कहिले मजदुरी नगरेका लक्ष्मण बस्नेत १८ बर्ष ट्रेड युनियनको सभापति छन । हिमालमिडियामा आक्रमण गर्नेहरु अहिले नेपाली मजदुरका स्वघोशित नेता भएका छन । संसारका मजदुरहरु एक हौ भन्नेहरु आपसिमा खिचातानिमा छन भने नबालाकहरुले बुनेका कार्पेट बेची करोड्पती हुनेहरु मजदुरी सेमिनारका आयोजक हुन्छन ।
ज्यालामा काम गर्ने धादिङ्का बुद्धिबहादुर, रिक्सा चलाऊने गोरखाका मिलन, राती ठेलागाडामा मकै भुटेर बेच्ने खोटाङका खेम प्रशादका कुरा कसले सुनुदिने ? उनिहरुका दु:ख कसले बुझिदिने ? राजधानीमा मध्यरातमा नाङ्गै नाच्नेहरुका साहरा छन यो मुलुकमा । ति बुद्धिबहादुरका दु:ख कुन चरोको नाम हो कसलाई के मतलब ? गोस्ठिमा सिरिङ्ग तात्ने भाशण छाटेर के गर्ने ? दुखियारिको लागि न कानुन छ, भए पनि न लागु हुन्छ त न परिमार्जनको लागि सन्सद नै कहिले चल्छ । फटाहाहरु बोल्ने, भाषण गर्ने । गरीब ताली पड्काउने । भरे घर गयो, खाने कुरो केही छैन, न छ बत्ती । लाला बालाको ड्वा-ड्वा रुवाबासी सुन्यो अनी स्वास्निको टोकसो । यस्तै छ, गरीबको कथा अनी मजदुरको जिन्दगी, सधैं पुर्पुरोमा हात हजुर । जय मजदुर दिवस ! जय नेपाल !!
Posted by Unknown Links to this post Labels: बिचार